स्वास्थ्य पेज » पाइल्स किन हुन्छ, कसरी समाधान गर्ने ? पाइल्स किन हुन्छ, कसरी समाधान गर्ने ? – स्वास्थ्य पेज
अहिले संसारभर जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा देखिएको छ पाइल्स। अंग्रेजी शब्द पाइल्सको अर्थ हुन्छ थुप्रिनु। मलद्वार वरपर मासुको डल्ला थुप्रिनुलाई पाइल्स भनिन्छ। यसलाई अल्काइ, बबासिर तथा हेमोरोइडस् पनि भनिन्छ। यसको सही उपचार भएन भने धेरै पीडा दिने र दैनिक जीवनलाई निकै प्रभावित गर्छ।
पाइल्स कसरी हुन्छ ?
दिसा गर्दा अंकुरमा छोएमा दुख्ने हुन्छ। यही सुन्निएका नसाहरू फुटेर रक्तस्राव हुनुलाई रगत आउने पाइल्स भनिन्छ। पाइल्स हाल अनुचित खानपानका कारण सबै उमेर समूहलाई भएको पाइन्छ।
पहिलो तह– यो सुरूआती चरण हो। यस अवस्थामा पाइल्स ९मासुको गाँठो० मलद्वारभित्रै हुन्छ, बाहिर देखिँदैन। यो दिसा गर्दा दुख्ने, फुटेमा रगत आउने हुन्छ।
– प्रशोधन नगरिएका वा कम प्रशोधन गरिएका प्राकृतिक पूर्ण अन्नहरूः नफलेको चामल, गहुँ, मकै, फापर, चोकरसहितको पिठो, आँटा आदि। प्रकृतिले दिएका हरिया देखिने पात भएका वा नभएका सबै हरिया तरकारीहरू। काँचो खान मिल्ने सलादहरू, प्राकृतिक रूपमै पाकेका, मौसम अनुसारका सबै फल।
पाइल्स भएकाले दैनिक खाना कसरी खानेरु
– दैनिक लिने अन्नहरू (कार्बोहाइड्रेट) भात, रोटी, च्याख्ला, ढिँडो आदिबाट एक भाग।
– हरेक खानासँग हरियो सागसब्जी, पात भएका हरियो तरकारी वर्गबाट एक कचौरा र पात नभएका हरिया देखिने तरकारी वर्गबाट एक कचौरा गरी लगभग ३०० ग्रामको एक भाग।
– खानाको अन्नमा काँचो सलाद फलवर्गबाट करिब २०० ग्रामको एक भाग गरेर बरोबर मात्रामा लिने।
खाना कति पटक खाने ?
-के, कतिपटक, कति थरी मिसाएर खाने भन्नेबारे कुनै पनि मतमान्यता बनाइरहन जरूरी छैन। आफ्नो शरीर र विवेक(ज्ञान प्रयोग गरेर खाए सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
-सामान्यतया हामीकहाँ बिहान खाना, दिउँसो खाजा र बेलुकी खाना गरी तीनपटक खाने चलन छ। अचेल बिहान नास्ता खाने पनि चलन बढेको छ।
-बिहान चाँडै ९९–१० बजे० खाना खाइन्छ भने नास्ता आवश्यक छैन। खाना ११–१२ बज्छ भने मात्र लिने। नास्तामा हल्का आहार, मौसमअनुसारका फलफूल वा तरकारीका सुप लिने।
-बिहानको खाना ९–१० बजे खाने। यदि नास्ता खाएको भए ११–१२ बजे खाने।
-बिहान ९–१० बजे खाना खाएकाले दिउँसो २–३ बजे खाजा लिने। खाजामा हल्का आहार, मौसमअनुसार फलफूल या तरकारीका सुप लिनु उपयुक्त हुन्छ। ख्याल गरौं, दिउँसोको खाजा आफ्नो शारीरिक परिश्रम र शरीरको अवस्था हेरेर हल्का या भारी लिनुपर्छ।
-बेलुकी ७–८ बजे भित्र बिहानको जस्तै खाना खाने। दिउँसो पेटभर खाजा खाएको भए बेलुकी हल्का आहार, तरकारी, सुप या फलफूल मात्र लिने।
व्यायामको नियमः दैनिक शरीरका जोर्नी सञ्चालन हुने व्यायाम गर्ने। बिहान खुला हावामा मर्निङ वाक तथा जगिङ या योग व्यायाम गर्ने। तर चर्को दुखाइ र रक्तश्राव हुँदा व्यायाम(योग गर्नु हुँदैन। रक्तश्राव र दुखाइ कम भएपछि विस्तारै गर्न थाल्ने।
एकै ठाउँमा धेरै बेर नबस्नेः अहिले इन्टरनेट, मोबाइल, ल्यापटप, टिभीका कारण बालकदेखि वृद्धसम्म एउटै कोठामा दिन बिताउँछन्। यसले शारीरिक गतिविधिमा कमी भइ विभिन्न समस्या हुन्छ। त्यसैले बाहिर हावामा हिँडडुल गर्ने, बारी(करेसा भए काम गर्ने लगायत शरीर सञ्चालन हुने काम गर्नुपर्छ।
नजिकै भए सकेसम्म हिँडेरै जाने। कुर्सीमा बसेर काम गर्नुपर्नेले समय(समयमा उठेर हात(खुट्टा हल्लाउने, केही पाइला हिँड्ने।
हतार नगरी शान्तसँग खाने। जे पनि राम्ररी चपाएर (३२ चोटि) खाने।
१-चिसो पट्टी वा चिसो पानीमा बस्नेः बिहान शौच गरेर पेट सफा भएपछि चिसो पट्टीको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ।
विधिः बस्न मिल्ने बाटामा हिप छोपिने गरी पानी राख्ने। पानी ४ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुनुपर्छ। यसका लागि बरफका दुई(चार टुक्रा राख्ने। अब पानीमा हिप डुब्ने गरी बस्ने। गर्मीमा करिब १५-२० मिनेट र जाडोमा १०–१२ मिनेट बस्ने।
२-उपवासः धेरै चर्को पाइल्स भएकाले हप्ताको एक दिन उपवास, रसाहार, फलाहार वा ताजा तरकारीका सुप खाएर बस्न सकिन्छ। यो एक प्रभावकारी प्राकृतिक र वैज्ञानिक विधि हो। एक दिने उपवासले आन्द्रामा जमेको फोहोर बाहिर निस्कासन हुन सहयोग पुग्छ। कब्जियत खुल्छ।
३- रामतोरीयारभिन्डी खानेः पाइल्स भएकाले रामतोरीया खाँदा शीतल गराएर घाउ चाँडै निको गर्न सहयोग गर्छ। रूघाखोकी र चिसो लागेको अवस्थामा भने नखाने।
४-घ्यूकुमारीको लेप लगाउने– मलद्वार सफा गरेर घ्यूकुमारीको लेप लगाएमा नरम बनाउँछ।
याद रहोस्, सधैं मनपरी खाने जीवनशैली भए औषधि लिनेरशल्यक्रिया गराएर पनि पाइल्स दोहोरिन सक्छ। मलद्वारमा प्रशस्त रक्तनली हुन्छन्, एउटामा ठीक भए पनि जीवनशैली नफेर अर्को रक्तनलीबाट पाइल्स दोहोरिन सक्छ।